Tottenham oo waayi doonta 5-laacib oo ka mid ah safkeeda hore kulankeeda habeen dambe ee Champions League – Gool FM
(London) 26 Sebt 2016. Naadiga Tottenham ayaa xaqiijisay inay London uga soo tagtay 5-laacib oo ka tirsan safkeeda hore kulanka habeen dambe ee Champions League ay la yeelan doonaan kooxda CSKA Moscow.
Kooxda ka dhisan London ayaa guul darro kala kulantay Monaca kulankeedii ugu horreeyay ee Champions League kal ciyaareedkan waxayna ku han waynayd inay jawaab ka bixin doonto kulanka habeen dambe ee CSKA balse nasiib darro shan laacib ayaa dhaawac uga maqnaan doona.
Dhaliyahooda Harry Kane ayaa la filayaa inuu garoomada ka maqnaado ugu yaraan lix usbuuc kaddib dhaawac canqowga ah oo ka soo gaaray kulankii Sunderland ee horaantii bishan.
Xiddigaha qadka dhexe ee Eric Dier iyo Mousa Dembele ayaa iyana joogi doona London, halka Danny Rose uusan ka soo muuqan tan iyo kulankii uu xulka England la yeeshay Slovakia.
Sidoo kale Tottenham ayaa waayi doonta kulanka habeen dambe saxiixooda cusub ee Moussa Sissoko kaa oo garoonka laga saaray kulankii dhawaa ay 2-1 uga adkaadeen Middlesbrough.